Ọma na ogbugba ndu ohu, nke anyị text okwu banyere n'abalị, bụ fọrọ nke nta ka a remix. M na-ekwu na n'ihi na Chineke kwere nkwa ime ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ ndị Ya ihe, ma ihe nile banyere ya abụghị ihe ọhụrụ. Uma ya agbanwebeghị, Nkwa ya agbanweghị, Ya bịa ná nzube agbanweghị. Ma e nwere ihe ụfọdụ banyere ọgbụgba ndụ a na-kpam kpam dị iche iche. Na n'ihi mmehie anyị, n'ọgbụgba ndụ ochie na-arụ ọrụ. Ya mere, Chineke mma na ya nke ọhụrụ. Ọ bụghị atumatu ya B, ma O zubere niile tinyere ime ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ na Ọkpara ya ga-eme ka e. Na anyị na-agụ banyere nke a ogbugba ndu ohu nime Jeremiah 31.
Ka m nye gị ụfọdụ ndabere tupu anyị na-agụ ederede.
na Exodus, mgbe ndị Chineke e megburu ohu ndị Ijipt, ha na-etiku ya maka nnapụta. Na Ọ na-anapụta ha n'uzo di itunanya na ihe otiti iri, na-esikwa obi Fero, na-ekewa Red Sea. Mgbe Chineke napụtara ụmụ Izrel, Ọ na-eme gbaa ndụ na. ọ na-ekwu, "Ugbu a,, ma ọ bụrụ na ị ga-erube isi n'ihe m kwuru ma debe ọgbụgba ndụ m, ị ga-abụ m nke zoro ezo nketa n'etiti ndi ọzọ nile…" (Exodus 19:5). Ọ na-echetara ha ihe O merela on n'ihi ha. Ọ na-enye ha 10 iwu na ha bụ ndị na-eso. Chineke kwere nkwa ịgọzi ha ma ọ bụrụ na ha erubere Ya isi, na akọcha ha ma ọ bụrụ na ha enupụrụ ya isi. Na ndị na-ekweta na ndụ a ma na-eme ka iyi irubere Chineke.
-Ada oké nri? Dị nnọọ ime ihe O na-ekwu na ihe niile ga-adị mma. Ha ga-Chineke nke zoro ezo nketa, Ọ ga na-agọzi ha, na ha ga-ebi n'obi ụtọ mgbe mgbe. Ihe bụ nsogbu bụ na ha erubeghị isi Ya. Ha emeghị ihe ha n'akụkụ nke ndibiat. Ya mere, anyị hụrụ onwe anyị n'ime oge nke Jeremiah.
Akwụkwọ Jeremaya bụ isi a akwụkwọ banyere ikpe. Kasị nke akwụkwọ bụ Chineke ndisua nnọ ndị Site n'ọnụ onye amụma Jeremiah maka nnupụisi, na-ebu amụma banyere mbibi ha. Ma e nwere ihe a obere ngalaba (30-33), ebe anyị text-achọta taa, ebe Chineke na-emesi ha obi ike nke Ya nkwa na-ha, n'agbanyeghị nnupụisi ha, na-ebu amụma ngọzi Ọ ga-awụkwasị ha. Otu ụbọchị mgbe ihe ndị a niile mbibi, O na aga kwa ha dịghachi. Ọ gwara ha nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ a ọ na-aga ka ya na ha. Na ọ bụ ihe anyị na-aga na-eche banyere taa. Enwere ọtụtụ, ọtụtụ ihe anyị nwere ike ikwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ma anyị na-aga na-elekwasị anya otu amaokwu a ụtụtụ.
Gee ntị n'ihe Ọ na-ekwu.
"Nke a bụ ọgbụgba ndụ m ga-eme ka ya na ulo Israel mgbe ahụ,"N'ọnu Jehova. "M ga-etinye iwu m n'ime ha mindsand dee ya na obi ha.
M ga-abụkwa Chineke ha,ha ga-abụkwa ndị m. " (Jeremiah 31:33)
M nnọọ na-arụtụ aka na anọ ihe anyị kwesịrị inwe ekele maka na-eto Chineke n'ihi na dị ka anyị na-atụgharị uche na nke a ederede.
The ederede na-ekwu,, "Nke a bụ ọgbụgba ndụ m ga-eme ka ya na ulo Israel…" -Ada ka a mba ihe ziri ezi? Ya mere, olee otú o si na ogbugba ndu ohu na-arụ ọrụ Chineke mba?
Ọma na Exodus Chineke mere gbaa ndụ Ya, bú Israel. Na na onodu nke akwụkwọ Jeremaya, ọgbụgba ndụ ọhụrụ a na-eme ka ọ dị mba Izrel. E nwere ụfọdụ doro anya clues nke Chineke zubere ime a na-arụ ọrụ n'èzí Israel, ma n'oge Chineke na-eme ka a nkwa ozugbo na mba Izrel banyere iweghachi ha.
Na mgbe Jizọs bịara Earth, Ya elekwasị anya bụ n'ụzọ doro anya na ndị Juu. na Matiu 15:24, Jesus na-ekwu,, "E zigara m naanị atụrụ furu efu nke ulo Israel." Ma nke N'ezie ụmụ Izrel jụrụ ya na site na njedebe nke Oziọma Matiu, Ya atụmatụ doro anya. Ọ na-ekwu na "Gaanụ mee,"Ọ bụghị nanị nke Israel, ma nke mba nile.
Na anyị na-ahụ ya n'ụzọ doro anya na olu ndi nile nke New Testament, na ọrụ Chineke nke na-azọpụta mmehie amụbawo. Ọ ọbụna na-eziga ndị kasị eleghi anya Apostle, Paul, ka kpọmkwem ndị mba ọzọ. Ya na-elekwasị anya bụ agaghịkwa on a mba ndị, ma on mba ndị.
Na anyị kwesịrị ito Chineke maka nke a! Ọ dịghị onye kwesiri ka a zọpụta na nyeghachi Chineke, n'ihi ya, O bu amara iji gbapụta ndị mmadụ n'aka Israel. Na Ọ nọgidere na-abụ amara site na àjà nzọpụta nye anyị nile. Ọ fọrọ nke nta ka ndị mmadụ na-anwụ n'akpịrị ịkpọ nkụ, na naanị otu onye nwere mmiri. Na na mbụ o yiri mmiri bụ nanị dị ka umu. Ma mgbe ahụ, anyị na-ahụ ka mmiri dị ka ọ dị anyị nile. Ọ bụ oké na umu a pụrụ ịzọpụta, ma ugbu a, anyị na-ahụ anyị niile nwere ike. Isi otú ihe atụ a dara mkpụmkpụ bụ na anyị kwesịrị ịnwụ n'ihi akpịrị ịkpọ nkụ. Ma Chineke ji amara nyere anyị niile nzọpụta na anyị kwesịrị.
Echere m na ọ bụ ezigbo doro anya na na ndị Juu + si dị. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ebe a n'abalị. Echere m na ọ dị mma ikwu na ọtụtụ n'ime anyị na ebe a na-adịghị Jewish. Ya mere, ụfọdụ n'ime anyị a kwesịrị karịsịa otuto. Na Chineke ga-emekwa ka ya anya na anyị nakwa na nke na O zitere Christ maka anyị. dị ka Ndị Efesọs 2 -ekwu, "Ya mere, cheta na o nwere mgbe unu ndi mba ọzọ n'anu-aru… cheta na ị bụ n'oge ahụ iche Christ, adịghị ná mma ndi amuru ndi Israel na ndị mba ọzọ n'ebe ọgbụgba ndụ nke nkwa, unu enweghịkwa olileanya, na-enweghị Chineke n'ụwa. Ma ugbu a n'ime Kraịst Jizọs unu ndị nọbu n'ebe dị anya na-a kpọtawo nso site n'ọbara nke Kraịst. " (Ndị Efesọs 2:11-13 ESV)
Toonụ Chineke na Ọ hapụghị anyị n'ebe dị anya, wezuga olileanya na-adịghị, na-enweghị Ya. Ya enweghị ike ime nke a, ma dị ka anyị maara na ọ bụ Ya atụmatụ niile tinyere. Na anyị maara ebe akụkọ na-agwụ. The akụkọ agwụ na ndị si ná mba niile na asụsụ niile na-efe nwa atụrụ ha n'otù na New Eluigwe na New Earth. n'ihi na "by [ya] ọbara [ọ] gbapụtara ndị Chineke si n'ebo niile na asụsụ niile na ndị niile na mba " (Rev 5:9).
Ya mere, nke a ga e metụta otú anyị na-adị ndụ ọnụ dị ka aru Kraist ọbụna ugbu. Dị ka ndị Chineke, anyị ga-agbalị ime ndụ ọnụ a n'ụzọ na-egosi anya Chineke na atụmatụ ịzọpụta a dị iche iche na. Mgbe ụfọdụ, chọọchị m na-eme baptism ụtụtụ Sunday. Na m hụrụ n'anya na-ele anya ruo n'ebe na-ahụ dị iche iche na-enye ihe àmà. Ha niile nwere dị iche iche iche, ma Chineke azọpụta amara nọ anọ ha niile. A pụrụ ikwu na anyị ebe a taa. Ana m ekpe ekpere mgbe ndị mmadụ na-abịa n'etiti anyị na chọọchị, ha ga-enwe ihe ijuanya Chineke arụ ọrụ ná ndụ nke ọtụtụ dị iche iche iche iche nke ndị mmadụ. Ị na-agaghị azọpụta site afọ gị ma ọ bụ agbụrụ. E nweghị iru eru ahụ ọzọ karịa ịbụ ogbenye. Na anyị niile bụ ndị nọ ná mkpa na.
A otutu folks m izute amaghị nke a. Ha na-eche na Chineke naanị azọpụta ụdị mmadụ abụọ: ma ochie na-acha ọcha dudes ma ọ bụ agadi nwa nne ochie. Ma ọ bụghị ezi, nri? Akwụkwọ Nsọ doro anya na "Onye ọ bụla nke na-akpọku n'elu aha Onyenwe anyị ga-azoputa." Ọ bụghị naanị ndị ọgaranya na-, ma ọ bụ ndị ogbenye, ma ọ bụ ochie ndị mmadụ ma ọ bụ na-eto eto, ma ọ bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị ọcha ma ọ bụ nwa ndị mmadụ. No, Chineke akp onyinye niile.
anyị, dị ka a na chọọchị, na-atụ egwu ime ihe ọ bụla na-eme ka o yie ka Chineke naanị azọpụta a ụfọdụ ụdị onye. Nke ahụ bụ mara mma omimi nke na ogbugba ndu ohu. Nke ahụ bụ otu n'ime ebube nke ihe ndị Gospel na Chineke ga-azọpụta onye mmehie ọ bụla na-ewepụta ha nwere na Kraịst. Ọ na-adịghị lekwasịrị anya ma ọ bụ naanị ọ bụla otu ìgwè.
Dị ka a na chọọchị, anyị nwere ike ghara nile si n'otu ebe na anyị nwere ike ọ gaghị na-agbụrụ, ma anyị nwere ihe ka ukwuu na-ahụkarị. Anyị bụ ndị na ọgbụgba ndụ na Chineke dị ndụ site na Kraist. Ma nke ahụ bụ nnukwu.
Nke a bụkwa ihe mere anyị kwesịrị eziga ndị ozi ala ọzọ na-ekpe ekpere maka ha! Nke a bụ ihe mere ụfọdụ n'ime anyị kwesịrị ngwongwo anyị na akpa na-aga! N'ihi na Chineke mere ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ, Ọ na a gụnyere mba. Mmadụ gwara anyị na onye chọrọ ịga gwa ha.
Ya mere, ọ bụ ezie na ederede okwu banyere ọgbụgba ndụ Chineke na ulo Israel, anyị maara na ya plan e gbasaa. Ka anyị na-eto Chineke na-arụ ọrụ mba. Gịnị bụ kpọmkwem na-arụ ọrụ anya dị? Olee ụzọ ndị ọzọ ga ọgbụgba ndụ a ọhụrụ?
"M ga-etinye iwu m n'uche ya ma dee ya n'obi ha."
Echeghị m na ihe odide na-agbalị ise ụfọdụ nnukwu ọdịiche ebe a n'etiti obi na uche. Echere m na ọ bụ naanị site na iji abụọ dị iche iche okwu na-ekwurịta okwu na Chineke gaje ime ihe dị n'ime nke anyị. Nsụgharị ndị ọzọ na-ekwu "M ga-etinye iwu m n'ime ha, m ga-edekwa ya n'obi ha."
Ugbu a n'ezie na oge mbụ Chineke nyere ha Iwu, O dere, sị ya ná mbadamba nkume. Ma Chineke na-ekwu, "Ọ dịghị, oge a gburugburu m na-aga ide na n'obi ha. "Mgbe mbụ Chineke nyere ha iwu, Ọ na-etinye ya n'ihu ha. Ma Chineke na-ekwu, "Ọ dịghị, oge a gburugburu, M na-aga etinye iwu m n'ime ha. "
Anyị na-agba nkịtị na-eche echiche nke obi dị ka a na-ekpo ọkụ, ajị ajị eme n'obi. Anyị na ndị obi na mmekọrịta na Ɛpo Day na ịhụnanya ndọrọ mmekọahụ. ma, Bible obi bụ ọtụtụ ihe karịa nanị a mushy obi ebe. N'ime Akwụkwọ Nsọ, obi dị anyị dum mmadụ ime ya. Ọ na-agụnye mmetụta uche anyị, ma o nwekwara uche anyị, anyị uche, na ọchịchọ anyị - niile na-eme n'ime. Okwu Hibru pụtara n'ezie ngiri-afọ-, n'ihi na nke ahụ bụ ihe oyiyi ha na-eji. Anyị na-eji okwu obi.
The obi bụ akụkụ bụ isi nke ihe nile anyị na-eme. Ọ dị ka GPS usoro nke na-eduzi omume anyị. Nsogbu ahụ na-ọ na-agbajikwa. Obi anyị n'ezugh'okè-eche na-ezighị ezi, na-eche na-ezighị ezi, na-achọ na-ezighị ezi. Na anyị nupụrụ Chineke, n'ihi na isi ihe ndị anyị bụ, anyị na-na na-ezighị ezi.
N'agbanyeghị ihe m mere na apụghị m ebuli na mmanya. Na n'agbanyeghị ihe ọ bụla mmehie na-, ha na-enweghị ike dị nnọọ inwe ike ịnọgide na iwu Chineke n'ụzọ zuru okè.
Na nke a bụ ya mere na iwu Chineke, dị ka ndị zuru ka ọ bụ, nwere ike mgbe zọpụta anyị. Nke a bụ ya mere nnọọ na-agwa anyị ihe ziri ezi ime ahụ enweghị ike ịbụ ezu.
O yiri ka o taa, a otutu nke okwu banyere inweta enyem bi ndụ rụrụ arụ nwere na-eme ihe na-eke. A mụrụ anyị na ụfọdụ ọchịchọ otú ha ga-ezi ezi. Olee otú
Chineke mgbe nwere nsogbu ihe na-ele otú nri, ma na-enwe mmekọahụ tupu alụmdi na, ma ọ bụ nwaanyị idina nwaanyị, ma ọ bụ ihe ọ bụla n'okwu banyere omume ọma.
Nke bụ eziokwu bụ na obi anyị nwere tiwara etiwa na mgbagwoju anya, na-ezighị ezi na-adị ziri ezi na ezi obi na-adị njọ. Mgbe anyị na di na nwunye iwe anyị ọ na-ele nri na oge ịkwanyere ha ùgwù. Mgbe m na-eto na-ele ndedehe music videos, ọ na obi ikike abịa mgbe ndị inyom na ihuenyo. Mgbe anyị ego bụ nnọọ ihe ziri ezi ọ na-ele nri-aghọ aghụghọ n'ule dị nnọọ ntakịrị bit on ụtụ isi anyị. Obi anyị ghọọ anyị aghụghọ. N'eziokwu n'ebe ọzọ na akwụkwọ Jeremaya, ọ na-ekwu, "Obi dị aghụghọ karịa ihe nile, na ọrịa kpara aka ọjọọ; ònye pụrụ ịghọta ya?" (Jeremiah 17:9 ESV)
Ọ bụ zughị ezu inwe iwu, n'ihi na obi anyị n'ezugh'okè naanị ikwu na nnupu isi. Chineke nwere na-emeghe anyị, na-enye anyị a ime mmụọ n'obi transplant.
Nke a esịtidem ọrụ bụ isi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ a na anyị kwesịrị ito Chineke maka ya. Ọ bụrụ na Chineke emeghị ka na-arụ ọrụ n'ime anyị, anyị ka ga-olileanya na-adịghị. Ndị Filipaị 2 na-agwa anyị, "Na-nzọpụta nke onwe unu were egwu na ima-jijiji…" Gịnị mere? "N'ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ka ga na-arụ ọrụ ya ụtọ. " (Ndị Filipaị 2:12-13 ESV)
ọ bụ n'ihi na nke ọrụ ya n'ime anyị na anyị ga-arụ ọrụ si nzọpụta anyị. Anyị nwere ike na-arụ ọrụ externally n'ihi na Chineke na-arụ ọrụ internally na obi anyị na-achọ na ime ihe Ọ na-akpọ anyị ka anyị. Chineke bụ initiator na enabler ebe a. Anyị kwesịrị ito Chineke maka na ịtụnanya ọrụ.
Ya mere, na ìhè nke eziokwu a, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị ga-eme. Anyị ga-arụpụta nzọpụta anyị. Anyị kwesịrị inwe obi ike n'ọgụ anyị na-alụso mmehie, amara na Chineke na-arụ ọrụ n'ime anyị. Chineke na-adịghị nnọọ ọdụ Dị n'Eluigwe barking si iwu na ndi-Ya na ịkatọ ha mgbe ha ida. Ọ na-n'ezie na-arụ ọrụ n'ime obi anyị ka o nyere anyị ntụkwasị obi ma na-erubere. Anyị enweghị mgbaghara maka ihe a umengwụ ịchụso Chineke.
Ma eleghị anya, taa na ị na-agbaso mgba ụfọdụ mmehie na ị na-eche dị ike i imeri.
-ume. Chineke na-arụ ọrụ n'ime gị. Na Ọ dị ike karịa ihe ọ bụla mmehie.
Nke m ndụ, M pụrụ ịhụ nke a mere o doro anya. Ọ bụghị na m na-adịghị ọgụ na mgba ọzọ, ma ọ bụ otú dị iche iche. M chetara ịbụ na ịhụnanya na mmehie m. Na mgbe ahụ, m na-echeta a mgbanwe ebe ọ enyekwu m nsogbu. Ọbụna tupu mụ amalite na-agbanwe agbanwe àgwà m, Achọpụtara m na ụzọ m chere, na otú m chere, na ihe m chọrọ na-agbanwe. Nke nwere ike ịbụ naanị esịtidem ọrụ Chineke. Na ọ dịghị ihe ụtọ karịa ekiri Chineke eme ihe na ndị ọzọ. N'ihi na m nwere ike na-aṅụrị ọṅụ ma na-ekwu, "Hey, O mere nke ahụ na mụ onwe m!"
Nke a bụ a pụrụ iche ụdị ịdị n'otu ahụ naanị Ndị Kraịst hụrụ òkè. Chineke na-arụ ọrụ n'ime anyị.
Anyị kwesịrị ito Chineke maka esịtidem ọrụ.
Ege ntị na-akụkụ ikpeazụ nke amaokwu a. Chineke na-ekwu,
"M ga-abụkwa Chineke ha,ha ga-abụkwa ndị m. "
Ọgbụgba ndụ nke Chineke na-eme ka abụghị nkwekọrịta. Ọ bụghị naanị ụfọdụ nkwekọrịta ya ime ha ihe ọma. Ọgbụgba ndụ a na-esite na-eji dịrị ná ndị Ya. Chineke abụghị nanị kwere nkwa ịgọzi anyị ihe, Ọ na-kwere nkwa ịgọzi anyị na Onwe Ya. Ọ bụ Chineke anyị. Ọ bụghị na ịbanye a mgbazinye maka a ọhụrụ ulo. Mgbe ị na-eme, ị na-nnọọ na-ekwe nkwa iji kwụọ ụgwọ i bi n'ụlọ dọwa kwa ọnwa. Ọ bụghị na. E nwere ihe a onwe onye, kwara ịhụnanya n'ebe niile o omume n'ebe ndị Ya.
Na e nwere ihe a ụfọdụ ụdị nwe n'ebe ahụ. Ọ na-zụrụ anyị ji ọbara nke Ọkpara Ya na anyị bụ nke Ya. Ọ na-echetara m nke Naanị n'ime Kraịst akara, "N'ihi na abụ m Ya na Ọ bụ nke m. Zutara, ya na oké ọnụ ahịa ọbara Kraịst."Chineke mgbe niile chọrọ inwe mmekọrịta onwe onye n'ebe ndị Ya, na nke a bụ ịnọgide na ọgbụgba ndụ ọhụrụ a.
Christian, ka i chere nke Chineke dị ka Chineke-gi, ma ọ bụ nnọọ dị ka ihe Chineke? Mgbe i chere banyere Chineke bụ Onye nanị Onye Okike ọtọ n'ebe ahu? Ma ọ bụ dị Ọ Nna gị? Ọ Dị ka n'Anya mkpụrụ obi gị?
N'ihi na otú ahụ ka i si ele ya na-agbanwe otú i si emeghachi omume Ya. Na ndị Izrel adịghị ebi ndụ dị ka ma ọ bụrụ na Ọ bụ Chineke ha. Ha na-efe arụsị. Ha na-adịghị atụkwasị obi Okwu Ya. Ihe ọ bụla banyere ha lifestyles kwuru na ọ bụ ha na Chineke. Na ihe ọ bụla banyere ndụ ha kwuru na ha bụ ndị Ya.
Anyị bụ ndị tụkwasịrị Kraịst bụ ndị Ya. Chineke zọọ aha Ya on anyị. Ihe niile bụ nke ya, ma a n'ụzọ pụrụ iche O lere anyị, si, "Ha bụ nke m." Ma ndụ anyị gbaara eziokwu a.
Jizọs gakwuuru obe dị ka anyị nnukwu onye nchụàjà, O nyere anyị ohere ka Chineke nke Eluigwe na Ala. M na-eche otú ọ ga-agbanwe anyị ekpere ndụ ma ọ bụrụ na anyị ghọtara eziokwu na Ọ bụ Chineke anyị na anyị bụ ndị Ya. M na-eche banyere Exodus ebe ndị Ya bụ ohu na amaokwu a kwuru, "Ọ nụrụ ha mkpu ma cheta ọgbụgba ndụ ya na ndị nna nna ha." Christian, Chineke mere onwe Ya ka anyị n'ụzọ na O na-agba mbọ Onwe-ya nye mmadụ niile. Chineke na-anụ ekpere gị ma Ọ ga-ịza n'ụzọ ịhụnanya. Ọ bụkwa Chineke gị. Ị bụ otu n'ime ndị Ya.
M na-eche otú ọtụtụ ihe ndị ọzọ nkasi obi anyị na obi ga-adị n'etiti ikpe ma ọ bụrụ na anyị ghọtara eziokwu na Ọ bụ Chineke anyị na anyị bụ ndị Ya. Ndị Rom 8 -echetara anyị na ihe nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke na Kraịst. M na-eche banyere Josef na-ere ya ịbụ ohu, na-ekwu na ihe ụmụnne ya pụtara ihe ọjọ, Chineke zubere ka mma. N'agbanyeghị ụdị ọnwụnwa anyị na n'etiti, Chineke ga-eji naanị ha maka ọdịmma anyị na ebube Ya. Ọ bụkwa Chineke gị. Ị bụ otu n'ime ndị Ya.
Echere m na m ndụ, bụ oge mgbe m na-adịghị aghọta a, M na-eme kpọmkwem ihe Brad akpọ anyị ka anyị ghara ime nke a ụtụtụ. Kama ịnọgide na-agbaso eziokwu na mụ onwe m Ya, na Ọ bụ nke m, M na-amalite na-atụgharị m Christian ndụ n'ime a talent show; ebe m ịrụ Chineke na m na-eme n'ime ya ezi graces ọ bụrụ na m ịrụ ọma ezu. Ma mgbe m ịghọta eziokwu na Ọ bụ Chineke m na mụ onwe m bụ nwa ya, Achọrọ m irubere Ya isi n'ihi ịhụnanya na nke ekele maka amara ya site. Enweghị m ịrụ na-apụta n'ihu Ya. Chineke bụ n'akụkụ m na. Ònye ka m bụ na-egwu egwu? Ọ na-eche banyere n'ịdị nsọ m ihe karịa m. Ọ bụ Chineke m. Abụ m otu n'ime ndị Ya.
M nwere ike ịga na na na. Ma ọ dị oké mkpa, na anyị jidere a jide a. Ọ bụ Chineke anyị na anyị bụ ndị Ya. Na anyị kwesịrị ito ya maka nke a interpersonal ọrụ nke nzọpụta.
M na-eche ihe ndị kasị mkpa okwu n'akụkụ ihe odide a bụ abụọ obere okwu gị nwere ike ọsọsọp n'elu, "M ga-." Chineke na-ekwu, "M ga-eme ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ." Chineke na-ekwu, "M ga-etinye iwu m n'ime ha." Chineke na-ekwu, "M ga-ede ya n'obi ha." Ọ na-ekwu, "M ga-abụkwa Chineke ha, ha ga-abụkwa ndị m."
Ụmụnna, ọgbụgba ndụ ọhụrụ a na-adịghị emecha adabere na gị. Ọ na-amalite na-agwụ na Chineke. Chineke bụ onye nwere plan. Chineke bụ onye obi ebere ma na-anapụghị anyị na oge mbụ anyị mere mmehie. Chineke bụ onye ahụ zitere Ọkpara Ya. Chineke bu onye ahu nke wụsara ya iwe si na Christ. Chineke bụ onye mere ka O si na ndi nwuru anwu. Chineke bụ onye ahụ nke mere i onye e kere ohu. Chineke bụ onye ahụ nyere gị mmụọ ya. Chineke bụ onye ahụ nyere unu obi ọhu. Chineke bụ onye na-edo unu nsọ. Chineke bụ onye ga na-ị. Na Chineke bụ onye ga-asọpụrụ gị. Ọgbụgba ndụ a na-amalite na-agwụ na Chineke.
Chineke kpebiri ime onwe ya ndị. Na o mere onwe Ya ka ndị mmadụ na-.
Dị ka ndị kwere ekwe a ga-ewetara anyị nkasi obi dị ukwuu. N'ihi na anyị maara na ọbụna anyị nupụ isi ike imebi ọgbụgba ndụ a. Ọbụna anyị na nzuzu apụghị ime ka ọgbụgba ndụ a ida. N'ihi na Chineke na-arụ ọrụ, Ọ na-agba mbọ onwe ya nye ayi, na Ọ dịghị ida.
Ndị a bụ mara mma ngọzi ndị ahụ akụkụ nke Ọgbụgba Ndụ Ọhụrụ. Ma eziokwu bụ ndị a na-agọzi dị naanị ndị na-na ọgbụgba ndụ ya na Chineke. Na anyị banye ediomi ye Chineke mgbe anyị atụkwasị ndụ, ọnwụ, na mbilite n'ọnwụ nke Ọkpara Ya, Jesu Kristi. Ọ bụrụ na ị don't mara Christ, hapụ gị mmehie na kweere na Ya taa. Kama awusirim Ya iwe, Chineke ga-awụkwasị apụghị ịchọpụtacha àkù on your isi n'ihi na mgbe ebighị ebi.
Ị pụrụ ịchọpụta, na picture na-ese na-ada awfully zuru okè. Na eziokwu bụ onye ọ bụla n'akụkụ ndị a nke na ogbugba ndu ohu anyị na-ekwu banyere ga-emezu n'ụzọ zuru okè ruo mgbe anyị bụ ndị na Ya. Mgbe anyị na-na Ya anyị ga-ahụ a zuru okè, ọcha mba nwunye ọhụrụ nke Kraịst. Mgbe anyị na-na Ya, anyị ga-a ndị mmadụ na nke zuru okè, ọcha n'obi na ịhụnanya Christ na niile banyere ụzọ Ya nile. Mgbe anyị na-na Ya, anyị ga-enwe a zuru okè mmekọrịta anyị na Chineke na anyị ga-asọpụrụ Ya ka ndị Ya. Tupu mgbe ahụ anyị n'ihu ma na-agbalịsi ka obi Ya ọzọ na ndị ọzọ kwa ụbọchị. Ka anyị ikpe ekpere.